ဂါဇီး ICC က / ဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဂါဇီးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ICC က)
တစ်ဦးကဂါဇီးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ICC က) တစ်ဦး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) မှကွဲပြားနေသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို ICC ကလာပ်စည်းထဲဆွဲသွင်းပါဝင်, ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာချွန်လွှာ, ဆောင်းပါးများရှိပါတယ်, နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တရားစွဲမှုတငျသှငျးနိုငျနှင့်ဥပဒေတစ်ခုတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရသည့်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအဓိကကျုံ့သွားစေပါတယ်ကုမ္ပဏီ၏ထီးအောက်မှာကြောင့်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့အထက်ဖော်ပြပါ features တွေမဆိုမရှိကြပါဘူး။ ထို့အပြင်စီ ICC ကဆဲလ်တစ်ကျုံ့သွားစေပါတယ်အတွက်ဆဲလ်တွေမပွုနိုငျဘယ်မှာတူညီတဲ့ကုမ္ပဏီတခြားဆဲလ်တွေနဲ့အပါအဝင်တတိယပါတီများနှင့်အတူကန်ထရိုက်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။
2008 ၏ဂါဇီးကုမ္ပဏီများဥပဒေ ICC ကရဲ့ထူထောင်နှင့်၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖျက်သိမ်းအုပ်ချုပ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ ICC ကအတွင်းနဲ့သူတို့ရဲ့သီးခြားဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဂါဇီးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ICC က) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ICC ကသို့မဟုတ်ဆဲလ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးက ICC အတွက်အစုရှယ်ယာသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်အားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အခွန်လွတ်: non-နေထိုင်သူ ICC ကန့်နှင့်ဆဲလ်တွေလုံးဝအခွန်အခမဲ့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အမေရိကန်နေထိုင်သူများကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်လူတိုင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့အစိုးရအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါအကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များနှင့်ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ပေါ်လာဘူး။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးက ICC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နိုင်သူတစ်ဦး ICC ကဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။
• ကန့်သတ်အန္တရာယ်များ: တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းတို့သည်အခြားသူများထံမှသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်များကိုကန့်သတ်ကြသည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းများကကျင်းပသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity အကြွေးထဲကနေသူတို့ကိုပယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကပိုင်ဆိုင်သည်။
• အဘယ်သူမျှမအစည်းအဝေးများ: နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများသက်ညှာစေခြင်းငှါ
• အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်: စာရင်းစစ်လိုအပ်ချက်များကိုသက်ညှာနိုင်ပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဂါဇီးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂါဇီးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ICC က) အမည်
ICC ကရဲ့ပြီးသားဂါဇီးအတွက်အခြားဥပဒေရေးရာ entity အသုံးပြုသောကုမ္ပဏီအမည်သို့မဟုတ်လည်းအလားတူကြောင်းအမည်မရွေးချယ်နိုင်ပါ။
အောက်ပါစကား ICC ကအမည် "ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်" သို့မဟုတ် "ICC က" သို့မဟုတ် "IC" ၏သူတို့ရဲ့သင့်လျော်သောအတိုကောက်တွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ICC ကယ့်ပုံမှန် stand-alone Non-ဆယ်လူလာကုမ္ပဏီများသည်ထက်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာကော်ပိုရိတ်အုပ်စုသည်ဖွဲ့စည်းပုံအဘို့ခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ထည့်သွင်းဆဲလ်တွေအစားတစ်ခုထက်ကော်ပိုရေးရှင်းထီးအောက်မှာဆဲလ်တွေကြောင့်အပြင်, ICC ကဆဲလ်တစ်ကျုံ့သွားစေပါတယ်တခြားဆဲလ်များ၏ liabilities ဆန့်ကျင် သာ. ကြီးမြတ်ကာကွယ်မှုပေးလိမ့်မည်။
ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အောက်ပါအမျိုးအစားများကို ICC ကန့်ဖြစ်လာနိုင်သည်
1 ။ အာမခံကုမ္ပဏီများအ;
2 ။ 1987 ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဥပဒေ (အထင်ကရနေရာများ) ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာမှတ်ပုံတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယာဉ်များ;
3 ။ ဂါဇီးဥပဒေများကိုအောက်ပါအမျိုးအစားများကိုအောက်မှာလိုင်စင်ရတစ်စုံတစ်ဦးကများကအုပ်ချုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်တခြားအမျိုးအစား: အထင်ကရနေရာများ, ဘဏ်လုပ်ငန်း, ထိန်းချုပ်ထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ, အာမခံ, ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ခြင်း, ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ။
ICC ကန့်ဖြစ်လာနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများအအမျိုးအစားများအပြင်, တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်ဘယ်မှာတစ်ခုတည်းမိသားစုများအတွက်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယာဉ်များဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်တဲ့ clients များတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဆက်ကပ်အပ်နှံဆဲလ်တွေကတဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။
ဆဲလ်တွေတူညီကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင်ကျန်ရှိနေသောစဉ်ကွဲပြားခြားနားသော client များအတွက်ကုမ္ပဏီများကကိုင်ပြီးအဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ ဤသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာပိုကောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ဆဲလ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သီးခြားဖို့လွတ်လပ်မှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦး ICC ကအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်မီအဆိုပါဂါဇီးဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (GFSC) ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ICC ကအတိုင်းကုမ္ပဏီအတည်ပြုရပေမည်။
အဆိုပါ ICC ကတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆဲလ်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ကို authorize အထူး resolution ကိုရှောက်သွားစေနိုင်သည်။ အဆိုပါ resolution ကိုဆဲလ်များ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်မှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့လျှောက်လွှာနှင့်အတူထည့်သွင်းခံရဖို့တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်များအတွက်စာချွန်လွှာများနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆဲလ် ICC က၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ။ တစ်ဦး ICC က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်များတွင်ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးဆဲလ်ရဲ့စာချွန်လွှာများနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများကတားမြစ်မဟုတ်လျှင်တစ်ဆဲလ်သည်အခြားဆဲလ်များတွင်ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ် ICC ကရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
တစ်ခုချင်းစီကိုဆဲလ်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒါရိုက်တာများရှိပါတယ်သော်လည်းသူတို့က core ကို ICC ကအဘို့ကဲ့သို့တူညီသောသူတွေကိုဖြစ်ရမည်။
အဆိုပါ ICC ကရဲ့အတွင်းရေးမှူးလည်းတစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်များအတွက်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ရပါမည်။ တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးမလိုအပ်ပါ။
ဆဲလ်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှင့် liabilities အတူတူ ICC ကအတွင်းအခြားဆဲလ်ကနေသီးခြားထားရှိမည်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဥပဒေ ICC ကန့်နှင့်၎င်း၏ဆဲလ်ပိုင်ဆိုင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများအတွက်စုဆောင်းနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကဆဲလ်နှင့် / သို့မဟုတ် ICC က၏သီးခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်အဖြစ်စီမံခန့်ခွဲခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ဦး ICC ကဆဲလ်ကိုယ်စားတတိယပါတီနှင့်အတူကန်ထရိုက်သို့ဝငျနိုငျသညျ။ သို့သော်ဆဲလ် ICC ကသို့မဟုတ်အခြားဆဲလ်များကိုကိုယ်စားကန်ထရိုက်သို့မဝငျနိုငျသညျ။ အဆိုပါ ICC ကအရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများရှင်းလင်းစွာစာချုပ်ရန်ပါတီအဖြစ် ICC ကသို့မဟုတ်ဆဲလ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါမည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ICC ကန့်က၎င်း၏ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်များအတွက်ယင်း၏အတွင်းရေးမှူး၏သီးခြားမှတ်ပုံတင်ထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်း ICC ကဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးရှိရမည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆဲလ်က၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ရုံးကဲ့သို့တူညီသောလိပ်စာသတ်မှတ်ရပေမည်။ အဆိုပါ ICC ကများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းလည်းမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ရှိရမည်။
အဆိုပါ ICC ကသူ့ဟာသူအဘို့နှင့်မိနစ်စာအုပ်များနှင့်မှတ်တမ်းများနှင့်အတူအသီးအသီးဆဲလ်များအတွက်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ICC ကဒါရိုက်တာများ ICC ကိုအားလုံးကိုအကောင့်များနှင့်ဆဲလ်များကို ပြင်ဆင်. ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ICC ကသူ့ဟာသူအားလုံးကိုစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများနှင့်ဆဲလ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အတာဝန်ရှိသည်။
ကစွန့်လွှတ် resolution ကိုဒါမှမဟုတ်ဒါရိုက်တာများကျိုးကြောင်းဆီလျော်စာရင်းစစ်လိုအပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြေရှင်းတဲ့ resolution ကိုရှောက်သွားဖြတ်သန်းမဟုတ်လျှင်တိုင်းဆဲလ်နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်များအတွက်စာရင်းစစ်ကိုခနျ့အပျရမယျ။
12 လအတွင်းအသီးအသီးဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ ICC ကနှင့်ဆဲလ်တွေ, စာရင်းစစ်သူတို့ရဲ့အကောင့်အသစ်များ၏မိတ္တူပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်, သူတို့၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့အစီရင်ခံစာ။ သူတို့အားစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူအဘို့တောင်းသောသူမည်သည့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, လိုက်နာမှုတောင်းဆိုမှုကနေ7ရက်အတွင်းပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ အဆိုပါ ICC က, ဤတောင်းဆိုမှုများ၏လိုက်နာမှုများအတွက်တာဝန်ရှိကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်း ICC ကအစုရှယ်ယာရှင်များ၏ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်များကိုလည်လျှင်ရှယ်ယာရှင်များနှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများလုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းစာချွန်လွှာများနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများမလိုအပ်ပါဘူးဆိုရင်သူတို့ကျင်းပခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူး။
အဓိကနှင့်၎င်း၏ဆဲလ်အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးအဖြစ်ကုသထားရာကျုံ့သွားစေပါတယ်မတူဘဲတစ်ဦးက ICC ၌ရှိသောဆဲလ်အခွန်အာဏာပိုင်များကသီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ကုသနေကြသည်။ တစ်ဦး ICC ကအခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Non-နေထိုင်သူနှင့်နေထိုင်သူဆဲလ်တွေရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက ICC ၏ဒါရိုက်တာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းလူထုမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်, အစုရှယ်ယာရှင်များ၏နှင့်အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ၏အမည်များကိုပြည့်စုံ privacy ကိုသူတို့နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်မဟုတ်။
ICC ကို၏ 100% ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆဲလ်တွေမရှိ, အခွန်, privacy ကို, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ကန့်သတ်အန္တရာယ်များ, ဝါးရှယ်ယာရှင်မရှိ, လိုအပ်သောအစည်းအဝေးများ, စာရင်းစစ်ဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူး: တစ်ဦးကဂါဇီးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ICC က) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ သက်ညှာခံရနိုင်ပြီး, အင်္ဂလိပ်နေရာတိုင်းပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။